ट्रोलको निशानामा : दुर्गेश थापा ,नारायणगोपालको गीत नचिन्ने ? – Namaste Dainik
July 25, 2020 July 25, 2020 NamastedainikLeaveaComment on ट्रोलको निशानामा : दुर्गेश थापा ,नारायणगोपालको गीत नचिन्ने ?
पछिल्लो समय नेपाली कलाकारहरु ट्रोलको शिकार भइरहेका छन् । नजानेको विषयमा ‘जान्दिन’ भन्न नसक्ने र गलत जवाफ दिएका कारण केही अभिनेत्रीहरु सामाजिक संजालमा ट्रोलरको निशानामा परे । केहीले अनावश्यक रुपमा बढी बोलेर आलोचनाको शिकार भए । केही भने आफ्ना सहकर्मीलाई बचाउने चक्करमा आफैं चिप्लिएर आलोचित भए ।
यद्यपि यी विषयमा भइरहेका ट्रोलको विरोध गर्दै कलाकारको बचाउ गर्नेले ‘सबै कुरा जान्नै पर्छ र ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै कलाकारहरुको बचाउ गरे । कला क्षेत्रका व्यक्तिलाई राजनैतिक विषय, सामान्य ज्ञानका कुरा सोधेर चेपुवामा पारिएको तर्क गरियो । आफ्नो क्षेत्रबारे पो जानकारी हुन्छ, सबै क्षेत्रको जानकारी कहाँ हुन्छ ? भनेर बचाउ गरियो ।
तर, पछिल्लो समय गायक दुर्गेश थापा ट्रोलरको निशानामा परेका छन् । निशानामा पनि यसरी परेका छन् कि उनले अरुले जस्तो ‘आफ्नो क्षेत्रबाहिरको’ कुरा सोधिएको भनेर बचाउ गर्ने ठाउँ पनि बाँकी छैन । उनले अरु विषयमा होइन आफ्नै क्षेत्रको कुरामा गल्ती गरिदिए । संगीत क्षेत्रकै ज्ञान नभएको देखिएपछि अहिले दुर्गेशमाथि ट्रोलरहरु खनिएका छन् ।
पत्रकार ऋषि धमलालाई दिएको अन्तर्वार्तामा दुर्गेशलाई स्वरसम्राट नारायण गोपालको गीत गाउन भनिएको थियो । धमलाले नारायणगोपालको गीत गाउन भने तर दुर्गेशले भक्तराज आचार्यको गीत ‘मुटु जलिरहेछ’ गाइदिए । यतिमात्र होइन दुर्गेशले नारायणगोपालको गीत आफूले धेरै सुन्ने गरेको भने तर नारायणगोपालको गीत चिन्न सकेनन् ।
दुर्गेशको यो गल्तीसँगै सामाजिक संजालमा प्रश्न उठेको छ –‘आफूलाई गायक हुँ भन्ने, नारायणगोपालको गीत नचिन्ने ?’ धमलाले दुर्गेशलाई यत्तिमै धर दिँदैनन् । धमलाले शिव परियारको गीत गाउन लगाउँदा ‘पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले’ गाउँछन् तर शब्द बिगार्छन्। यम बरालको गीत गाउन पठाउँदा रामकृष्ण ढकालको ‘ओराली लागेको हरिणको चाल भो’ गीत गाउँछन् ।